Ukusebenza kwe-Ultrasonic inline - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ukucubungula kwe-ultrasonic ekhoneni"
Ukulungiswa kwe-Ultrasonic ketshezi kungenziwa ngezindlela ezimbili ezihlukile: kungaba nge-batch noma njengenqubo yokufaka ngaphakathi. Ngenkathi kusetshenzwa nge-batch, i-sonotrode, eyaziwa nangokuthi yi-probe ye-ultrasonic, ifakwe esikebheni esivulekile noma esivaliwe (isib. I-beaker, i-batch, umgqomo), ngoba i-inline sonication ephakathi idla ngokuqhubekayo ngokusebenzisa i-ultrasonic flow cell reaction, lapho uketshezi noma ukufiphaza kuhlanganiswa nokuxineka okukhulu kwe-hydraulic shear ekhiqizwa yi-acoustic cavitation. Kwi-reactor ye-ultrasonic inline, indawo ephakelayo idluliswa ngqo endaweni eshisayo ye-cavitational, lapho uketshezi luphethwe kakhulu futhi lugxilisiwe luphethwe ngamandla we-ultrasound. Lokhu kwenza ukwelashwa kwe-inline ukwelashwa kufane kakhulu futhi kuqinisekisa ikhwalithi yenqubo engaguquki.
I-Inline sonication ingaqhutshwa njengokudlula okukodwa noma ukuphinda kufakwe kabusha, lapho uketshezi ludlula khona izikhathi eziningi ngokusebenzisa insimu ye-ultrasonic cavitation.
I-Hielscher Ultrasonics ngumlingani wakho onokuhlangenwe nakho kwezinqubo eziphezulu zokusebenza kwe-ultrasonic ku-batch nangemodi eqhubekayo emugqeni. Amaprosesa anamandla we-Hielscher enamandla we-Hielscher aqala elebhu nasebhentshini-phezulu kuya esikalini esigcwele sezimboni. Izinhlobonhlobo ezahlukahlukene zezinsiza ezifana ne-flow cell reaction, i-sonotrodes nezimpondo ze-booster zivumela ukumiswa okuhle kwe-ultrasonicator okuhlose ukusetha okuphelele kwezidingo zenqubo ethize.
Funda kabanzi ngokuqhutshwa kwe-inline ultrasonic kanye nezinzuzo zayo!